Inkcazo yeKota yeThola yeQela leGalofu
Yiyiphi iNkundla yeMidlalo kwiGalofu?
Ixesha elithi "inkqubela yezobukhosi" lisetyenziswe kwiikholeji zegalufa kwaye zinokuba neentsingiselo ezininzi:
Oku kunokuthetha ukuba igumbi legalufa elibhekiselweyo liyi-site ebaluleke kakhulu kwaye ibaluleke kakhulu kumqhubi wegalufa;
Kungathetha ukuba igumbi legalufa elibhekiselweyo linye yezifundo ezimbini okanye ngaphezulu kwiqela elifanayo okanye kwisiza, kwaye kunzima kakhulu kwezo zifundo;
Okanye, ekusebenziseni okwakusemva kwemimiselo emibili yokuqala, "inkqubela yezobuqili" inokuthi ithengise ulwimi olulungiselelwe ukugubha ishishini kwiziko legalufa.
I-Literal Championship Course
Ngeentsuku zokuqala zegalufa lobuchwephesha kunye nebalasethi yegalufa, kwakunobungqina bodwa kuphela: i -Open Championship . Yintoni edla ngokubhekisela namhlanje njengesiBurmese Open. Eyasungulwa ngowe-1860, ngamashumi eminyaka bekukuphela kobuphiswano belizwe obudlalwa ngabadlali begalufu abaqeqeshiweyo.
Ngama-1890 nakwiminyaka yokuqala ye-1900, elinye ilizwe livuleka kunye nezinye iindibano zegalufti zegalufa ezibonakalayo ziqale ukubonakala.
Kwaye "inkqubela yeqonga," njengexesha elibonakalayo kunye nelexicon ye-golfer , imihla ukusuka kula maxesha okuqala e-golf. Naliphi na iklasi yegalufu eyayisetyenziswa njengeziko le-Open Championship okanye ezinye iindibano ezinkulu zexesha elide, ngokwenene, "iqela lobungqina."
Iikhosi zeMidlalo kunye neZiko leMigangatho
Ekugqibeleni, intsingiselo yegama liyakwandiswa. Iifoto zegalufa ezizimele ngasese kunye neendawo zokugaluba zoluntu ezibandakanya iikholeji enye: mhlawumbi ezimbini okanye ngaphezulu kwezi-18-holers; okanye i-18-holer ne-9-holer; okanye u-18-holer ogcweleyo kunye ne-18-holer-course.
Kwiminyaka yokuqala yekhulu lama-20, loo makilabhu aqala ukubonakala ngokukhawuleza. Kwaye ukuba loo iqela liye lenza umdlalo wegalufa, ngokuqhelekileyo yayiza kwenza loo mqhudelwano ube bhetele kwiikhosi zayo, xa kunzima kakhulu kwiikhosi zayo.
Ngenxa yoko, loo mingxuma ye-18 yabizwa ngokuba yi "ngqungquthela yekhosi" kuba yayisetyenziselwa ukufumana ibhola.
'INkcazo yeComputer' njengeNkqubo yokuThengisa
Olunye ukwandiswa kwengcaciso "yeqonga lobungcali" lafika emva koko, xa izifundo zegalufa zaqala ukwakhiwa njengendawo yokuphuhlisa izindlu kunye nezinye iindawo zokuthengisa.
Ungatsho ukuba ekusebenziseni kwayo kwanamhlanje, igama elithi "iqela lobungqina" liye lahlaziywa. Namhlanje, abadlali begalufu bahlala behlangana nekota kwiintengiso. Naliphi na iklasi yegalufa elitsha linokukhetha ukuzithengisa ngokwayo njengengqungquthela "yobukhosi" ukuzama ukukholisa abagaluli bekhwalithi.
Ngoko namhlanje, kwiimeko ezininzi (kodwa kungekhona zonke), ibinzana alinakuba yinto engaphezu kwexesha lokuthengisa.
Ngaba ufuna ukubona i-Coural Championship Golf Courses?
Ukucinga ngentsingiselo yeNombolo 1 ngasentla (izifundo zangempela zobuphiswano, abo babambe iqela lobungcali obukhulu), ungathanda ukubona uluhlu lwezo zifundo? Uluhlu lwee- US Open golf zifundo ziquka ezininzi zeendlela ezifanelekileyo kwiUnited States.
Ngokufanayo, uluhlu lweeBrithani ezivulekileyo zeGolf zibonisa iikhosi zokudibanisa ezenza i- Rota evulekileyo . Kwaye uludwe lwee-golf ze-PGA Championship zibonelela zonke iindawo ezinobungqina obukhulu obujoliswe yi-PGA yaseMelika.
Indima yeCoccer Scout
U-Scarlett Johansson Uthetha Ngeengxelo "Ngokulahlekelwa Ngenguqulelo"
Imfazwe Yehlabathi I: Imfazwe YeeMida
ITyco R / C